REPUBLICADAINIK | » भण्डारीले विकासको मूल फुटाइदिएपछि आत्तिए ज्ञवाली
भण्डारीले विकासको मूल फुटाइदिएपछि आत्तिए ज्ञवाली
गुल्मी । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गुल्मी क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बनेका चन्द्र भण्डारीको पक्षमा अहिले गुल्मीमा व्यापक जनलहर चुलिएको छ ।
शालीन, इमान्दार र विकासप्रेमी नेताको रुपमा पहिचान बनाएका नेता चन्द्र भण्डारीको कार्यकालमा सडक, पुल पुलेसा, स्वास्थ्य शिक्षा र कृषि क्षेत्रको सुधारमा उल्लेखनीय कामहरू भए ।
२०७० सालमा भण्डारी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले गुल्मी जिल्लामा ५ वटा पक्की पुलहरु थिए । तर, जिल्लाले धेरै पक्की पुलको अपेक्षा राखिरहेको थियो ।
एमालेबाट यो क्षेत्रमा प्रदीप ज्ञवाली उम्मेदवार बनेका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा भण्डारीले ज्ञवालीलाई नराम्रोसँग हराईदिएका थिए ।
सधैं जोखिमको यात्रा गर्नुपर्ने गुल्मीबासीहरुको समस्या देखेर नै भण्डारीले अहिले लगभग प्रत्येक नदीमा पक्की पुल बनाएका छन् । अर्थात् उनको पहलमा अहिले धेरै ठाउँमा गुल्मीबासीले पक्की पुल पाएका छन् ।
उनी सांसद् हुँदामात्रै त्यो क्षेत्रको विकासमा लाग्ने नेता त होईनन् । तर, नेपालको जस्तो शक्तिकेन्द्रको भनसुनको आधारमा काम हुने प्रशासनमा सामान्य नागरिक बनेर जाँदा न त योजना पार्न नै सहज हुन्छ । न त ढिलाई गर्ने ठेकेदारलाई तह लगाउन नै ।
त्यसैले गुल्मीमा निर्माणाधीन सबै विकासका कामहरुलाई समयमा नै पूरा गर्नको लागि गुल्मीबासीहरु फेरि एक पटक भण्डारीलाई मौका दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कूल ६४,८८७ घरधुरी रहेको गुल्मीमा ७३ प्रतिशत साक्षर नागरिकहरु रहेका छन् । अहिले ८९ प्रतिशत सुरक्षित खानेपानी र ६४.२प्रतिशत विद्युतको पहुँचमा रहेका छन् । कूल ११ सय ९ किमी सडक क्षेत्र रहेको सो क्षेत्रमा सबैप्रकारका स्वास्थ्य संस्था गरी कूल १ सय ७० प्रकारका स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् ।
निर्माण भईसकेका र निर्माणाधीन पुलहरुको विवरण
१३. अघाह (पाल्पा–दिगाम)
२०. छल्दी खोला/भाड गाउ
२२. तिनमुखे पुल रिडी (तीन जिल्ला जोड्ने पुल)
२३. बगाले खोला पुल
यी बाहेक २० भन्दा बढी अन्य पक्की तथा झोलुंगे पुलहरु निर्माणाधीन
Published : Wednesday, 2017 November 15, 10:47 am